ReviewEuropeFx Review - Uru na ọghọm kpughere | Full Eprel 2021 Ntuziaka
Nyocha EuropeFX: Gbasaa, Platgwọ Platform, Akụ Ahịa, na Iwu 2021
E nwere ọtụtụ nde mmadụ na-azụ ahịa Forex kwa ụbọchị na ebe itinye ego n'ịntanetị. Ewu ewu na nke a ultra mmiri mmiri ego ahịa na-egosi ihe ọ bụla ihe ịrịba ama nke selata ma. N'ezie, enwere ọtụtụ narị nyiwe azụmaahịa na-enye ndị na-achụ ego agbasa agbasa na plethora nke akụ dị iche iche - mana taa anyị na-ekwu maka EuropeFX.
Dị ka ị nwere ike ibu ụzọ si aha ahụ pụta, ikpo okwu a na-etinye uche na azụmaahịa azụmaahịa. Agbanyeghị, saịtị ahụ na-enyekwa plethora nke ngwa CFD. Onye na-ere ahịa a na-enye 'Nhazi Nhazi' (STP) maka iwu ya - nke pụtara na ọ nweghị ọrụ ntinye aka.
Na nyocha a, anyị ga-agba ọsọ na ihe niile gbasara EuropeFX. Nke a na-ekpuchi usoro metrik dị ka ọrụ na mgbasa, ngwa tradable, nchekwa, yana otu esi edebanye aha.
EuropeFX - Na-eduga Forex na CFD Trading Platform
Na-azụ ọtụtụ ụdị Forex na ngwa CFD
Ọdịdị ọnụahịa dị ukwuu gụnyere mgbasa siri ike
Jikọọ akaụntụ EuropeFX gị na MT4
Gịnị bụ EuropeFX?
Dịka anyị metụrụ aka, EuropeFX bụ usoro azụmaahịa ọkachamara na Forex na CFDs. Ọzọkwa, anyị chọpụtara na e nwere ihe karịrị 300 ngwa ahia ebe a - dị ka CFDs na ebuka na-acha anụnụ anụnụ, ngwaahịa, ihe ngosi ụwa, na FX abụọ dị ka ndị isi, ụmụ aka na ndị ọzọ. Nke a pụtara na ị nwere ike ọ bụghị naanị ịzụta kamakwa obere ere.
Lọ ọrụ a abụrụla naanị na mbara igwe kemgbe 2014, mana nke ahụ egbochighị ya ịnweta nnabata ziri ezi na ahia n'ịntanetị obodo. EuropeFX bụ nke CySEC na-achịkwa nke ọma na Saịprọs (ebe onye na-ere ahịa nwere ọfịs). Na mgbakwunye na nke a, enwere ike ịchọta ọfịs na Australia na Germany.
Anyị kwuru na EuropeFX na-enye ọtụtụ ụdị akụ a na - adọkpụ - ịghara ịkọ maka igbu STP, ihe mmụta na ngwa ahịa. Ihe niile a kwuru n’elu ka anyị ga-ekwu maka ya n’okpuru ebe a.
Kedu ihe m nwere ike ire na EuropeFX?
Dị ka anyị kwuru na e nwere ihe karịrị narị atọ tradable ngwá n'elu ikpo okwu a. N'ihe banyere Forex, EuropeFX na-enye ụmụntakịrị, ndị isi na ndị ọzọ. Na ore ahia-enye ohere obere nha, nke pụrụ ịbụ karịsịa ọma ma ọ bụrụ na ị na-achọta ụkwụ gị na ahia na dị nnọọ chọrọ nwalee mmiri.
Ọ bụrụ na ị maghị, nke a bụ oke nha na-arụ ọrụ na Forex:
Micro size 1,000 nkeji nke isi ego
Obere nke 10,000 nke isi ego
Sizekpụrụ nke 100,000 ụdị nke isi ego
Dịka ị pụrụ ịhụ, micro pụtara na ị nwere ike ịzụ ahịa pere mpe nke oke nha ọkọlọtọ.
Ọ dị mma mgbe niile mgbe onye na-ere ahịa na-enye ọtụtụ ndị ahịa ụdị ngwa ahịa, ọkachasị nke mere na ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị banyere ihe ịchọrọ ịzụ ahịa - ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịgbasa pọtụfoliyo gị - ịkwesighi ịchọta onye na-ere ahịa ọhụụ.
EuropeFX na-enye ọtụtụ akụ dị ka CFDs, nke pụtara na ị nwere ike ikwupụta na ọnụego na-agbanwe agbanwe nke ngwa ego na-agbanwe ngwa ngwa (ma ọ bụ ahịa).
Anyị ejirila ndepụta nke akụ ala ị ga-enweta mgbe ị debanyere aha na EuropeFX.
Forex bụ otu n'ime ahịa ahịa mmiri mmiri zuru ụwa ọnụ. N'ezie, ihe karịrị $ 5 puku ijeri na-arụsi ọrụ ike ahịa kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ okpukpu iri abụọ na ise a na-ere ahịa na ahịa ụwa. Ọ bụ ezie na EUR / USD bụ ụzọ ego kachasị azụ ahịa na ụwa, enwere ọtụtụ ihe ịhọrọ site na EuropeFX.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime ụzọ abụọ ị ga - atụ anya ịhụ na ikpo okwu Europe FX:
Minor ụzọ abụọ: EUR / GBP, CAD / JPY, GBP / JPY, GBP / AUD, EUR / JPY, EUR / AUD, GBP / CHF
Isi ụzọ abụọ: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, USD / JPY, NZD / USD
Pzọ abụọ dị iche: AUD / JPY, EUR / AUD, CAD / JPY, EUR / RUB, USD / SEC, EUR / SEK, USD / HKD, EUR / TRY
Companylọ ọrụ a bụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ise, nke pụtara na ọnụahịa niile ga-agwa gị maka ntụpọ nke ise. Ihe kpatara EuropeFX ji ekwuputa etu a bụ ịnye gị mgbasawanye ngwa ngwa. Anyị ga-ekwukarị gbasara mgbasa n'oge na-adịghị anya.
'Ọpụpụ' mgbe ahia Forex na EuropeFX bụ 50%. Nke a pụtara na mgbe oke oke gị dara n'okpuru 50%, onye na-ere ahịa ga-amalite imechi ọnọdụ na-akpaghị aka. Nke a ga - abụ ikpe rue mgbe enwere ego na akaụntụ gị iji mepee ọnọdụ ndị ọzọ.
CFDs na Ndekọ
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na EuropeFX na-enyekwa ndeksi ahia site na CFDs. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa nwayọ nwayọ ma kwụsie ike na-enweghị ihe egwu karịa ụdị azụmaahịa ndị ọzọ, mgbe ahụ indices nwere ike ịbụ ngwa ọrụ ego kwesịrị ekwesị maka gị.
Ihe mbụ ekwuru bụ FTSE-100, nke na-eme ka ụlọ ọrụ 100 kachasị elu na London Stock Exchange (LSE). Ihe ngosi ndi ozo nke enyere site na ikpo okwu a bu Dow Jones Industrial Index (DJIA), Japanese Nikkei 225 (NI225), 500 nke Standard & Poor (S&P 500), na ndi ozo.
Nwere ike ịzụ ahịa ihe niile ekwuru na mbụ na EuropeFX site na iji ikpo okwu MT4 - nke anyị na-ekpuchi ma emechaa.
N'ihe banyere ebuka na ịkekọrịta ahia, ị gaghị enwe mmechuihu na ihe dị na EuropeFX. Anyị chọtara ụfọdụ ụlọ ọrụ ngwaahịa na-acha anụnụ anụnụ na ụwa n'elu ikpo okwu a - dị ka Facebook, Google, Apple, na Nike.
Ikpo okwu a nwekwara otutu nnukwu ngwa ahia di ka Dynavax Technologies Inc, Merck KGaA, Gilead Sciences Inc, Amgen Inc, Moderna Inc, na ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na akwadoro ị recreụ mmanya na ị underụ mmanya n'okpuru Iwu Ọchịchị Cannabis nke 2018 (karịa 30 steeti na US), enweela mmetụta pụtara ìhè na ebuka metụtara ngwaahịa a. Ọtụtụ ndị na-etinye ego na-enwe mmasị na ahịa cannabis - ya mere, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke usoro ntanetị dị ka EuropeFX na-enye ebuka cannabis.
EuropeFX na-enye atọ nke ebuba ndị na-eduga na n'elu ikpo okwu bụ Scotts Miracle-Gro, GW Pharmaceuticals, na AbbieVie Inc. A na-enweta ego niile e kwuru n'elu dị ka CFDs
N’ụzọ na-akpali mmasị, Satoshi Nakamoto (onye na-emepụta aha njirimara) webatara cryptocurrency izizi izizi nke ụwa. Ọ bụrụ na ị maghị, mkpuchi mbụ anyị na-ezo aka na ya bụ Bitcoin. Ngwa ngwa rue afọ 2020 ma echee na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5,000 ụdị cryptocurrencies dị adị - ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa.
Mgbe ị na-eji EuropeFX, enwere ike ịzụ ahịa cryptocurrencies na ikpo okwu MT4. Nke a pụtara na ị nwekwara ike iji ezigbo ngwaọrụ na atụmatụ dịnụ. Anyị ga-amụnyekwu ọkụ na ngwaọrụ ị nwere ike ịnweta n'oge na-adịghị anya.
Yabụ, ị ga-echerịrị ụdị ego mkpuchi ị ga-enwe ike ịzụ ahịa? N'oge ederede, EuropeFX na-enye Bitcoin, Ripple, Litecoin, Dashcoin na Ethereum CFDs - niile megide USD.
Ọ bụrụ n’ịchọpụtala ahịa azụmaahịa dịka mmanụ na ọla edo, yabụ EuropeFX kpuchiela gị. Ebumnuche nke ịzụta ma ọ bụ ire ngwaahịa bụ iji nweta uru site na mgbanwe ọnụ ahịa na mgbanwe na ntinye na mkpa ụwa.
Na EuropeFX ị nwere ike ịzụ ahịa ma ngwaahịa siri ike ma dịkwa nro. N’okpuru ebe anyị edepụtara ụfọdụ ngwa ahịa dịịrị gị na EuropeFX.
Ọla kọpa, Ọlaedo, Ọla kọpa
Ọka, ọka, na owu
Gas, mmanu mmanu ndi ozo na ndi ozo
Agbanyeghị na ndị na-ere ahịa na azụmaahịa ịme ego - ị ga-achọ ịrapara na nyiwe nke na-akwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ pere mpe.
Iji mepụta foto doro anya nke ihe ị nwere ike ịtụ anya n'elu ikpo okwu a, anyị abanyela ntakịrị nkọwa gbasara ụgwọ ị ga-akwụ na EuropeFX.
Mgbasa na EuropeFX dị ala dị ka 0.1 pips. Dika anyi kwurula, ikpo okwu a na-ekwuputa onu ahia site na iji onu ogugu nke ise, na-enye ohere maka onu ahia di ka micro na mini.
0.1 pips bụ ibu asọmpi ọ bụ ezie na-echeta na onye ọ bụla ngwá ga-iche mgbe ọ na-abịa mgbasa n'onyinye. Na-ezo aka na kacha nta gbasaa - EuropeFX na-enye 'raw gbasaa' n'ofe Forex, indices, shares, cryptocurrencies, and commodities.
Commission na EuropeFX na-ebo ebubo na pasent 7% - nke a na-abawanye site na nza nke nza.
Ka anyi kwuo na onu ahia uzo Amazon bu 1749.45
Tochọrọ ahia 0.1 (nza nha)
Ọrụ ahụ bụ 7%
Paykwụ € 12.24 (1749.45 x 7% x 0.1 = 12.24)
EuropeFX na-enyekwa mbelata na ọnụego ọrụ maka ndị ahịa. Maka ama ndị ọzọ ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ gọọmentị - kpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa ma ha ga-eji obi ụtọ tụlee gị mbelata ego. A ga-enye ego ịkwụsị ọrụ ọ bụla enyere maka obere oge nke ụbọchị 14.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịhapụ ọnọdụ n’abalị mgbe ị na-ere ahịa na EuropeFX, a ga-ebo gị ụgwọ mgbanwe (ụgwọ abalị). Na nkenke, nke a bụ ọmụrụ nwa nke a na-akwụ ụgwọ dabere na ọdịiche dị n'etiti ego 2.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ị gbakọọ ọnụego mgbanwe a maka onwe gị, ikpo okwu nwere ngụkọta aka:
Maka ụgwọ ụgwọ n'abalị, ngụkọta oge ahụ: (Nha nkwekọrịta * Oke nha * Mgbanwe ego / 100) / 360
Maka ihe ọ bụla: (Nha nkwekọrịta * Oke Oke * Ọnụahịa ahịa * ọnụego gbanwee / 100) / 360
N'ihe banyere ụgwọ ndị ọzọ, anyị ga-ekwupụta na enwere ego adịghị arụ ọrụ nke 50 EUR / USD / GBP ma ọ bụrụ na ịnweghị ahia maka ọnwa kalenda 3. Mgbe nke ahụ gasị, a ga-akwụ ụgwọ ahụ kwa ọnwa.
Trading Platform Comp Kwekọrọ n'Ozizi
N'ihe banyere usoro nhazi ahia, EuropeFX anaghị enwe ọtụtụ. N'ebe a, ị nwere ike ime ọtụtụ MT4, eFXGO, RoboX, ma ọ bụ atụmatụ Mirror Trader.
Anyị achịkọtara ndepụta nke usoro ntanetị kachasị baa uru nke kwekọrọ na akaụntụ EuropeFX.
O doro anya na MT4 bụ otu n'ime usoro ịzụ ahịa na-aga nke ọma na nke na-ewu ewu na mbara igwe. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ maka ndị ahịa iji rite uru na ngwa ahia a. Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịzụ ahịa ọtụtụ akaụntụ na MT4, mana ịnwere ike iji EA iji mepụta ahịa na akpaghị aka na nnọchite gị.
N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime isi ihe ndị ọzọ nke ịzụ ahịa site na MT4:
Nkọwapụta aka dị ka Index Index (MFI), ZigZag, Index Facilitation Market, Accelerator Oscillator, Trendline, Fibonacci, Envelopes, On Balance Volume indicator (OBV), Stochastic - na ọtụtụ ndị ọzọ
Ngwaọrụ dịka: Xandra Summary, ụkpụrụ SL & TP, Mpaghara nkwụsị, SHI Channel True, Autofibo, Calculator Nhazi Ọnọdụ, NewsCal, Chart Undock, Tracker i-Profit, Iwu Ngosipụta, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Ihe ngosi ndi mara mma gunyere Bollinger Bands, Ichimoku, Exponential Moving Average (EMA), The Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ndị ọzọ dị
Tonnes nke ahịa iji nhọrọ ona dị iche iche ego /trading azum
Ivezụ ahịa na-arụ ọrụ na robot na-akpaghị aka
Ngwa a dị maka ioS na gam akporo ma nyere gị aka ịzụ ahịa CFDs, cryptocurrencies na forex site na nkwụ aka gị. Are na-enwe ike itinye na akaụntụ gị n'ụzọ dị nro, rụọ iwu na ọtụtụ ngwa ahia - na ọbụna lelee akụkọ ego na akụ na ụba kachasị ọhụrụ.
eFXGO na-enye ndị ahịa ihe karịrị 100 akụnụba ego, ụlọ ọrụ azụmaahịa nọọrọ onwe ha, nyocha nyocha dị elu yana ngwaọrụ eserese ahaziri. Na mgbakwunye na nke ahụ, enwere ike ịnweta ngwa na nyocha nke EuropeFX, ọnụego ndụ oge, mgbanwe mgbanwe dị mfe, na igbu usoro dị mfe.
RoboX bụ igwe eji agba ahia nke nwere ahaziri iji jikọta ụdị azụmaahịa gị na akụ gị ndị masịrị gị. N'ụzọ bụ isi, RoboX na-emepụta algọridim nke mebere atụmatụ ahaziri iche na njikwa ihe egwu.
Iji bido, ị ga-achọ jupụta na ajụjụ mgbe ị gbasoro njikọ RoboX. Sọftụwia ahụ ga - eji azịza gị mee nyocha ihe karịrị otu ijeri ụzọ aghụghọ azụmaahịa wee wuo ngwungwu azụmaahịa ahaziri iche maka mkpa gị.
Ihe mgbakwunye mgbakwunye EuropeFX ọzọ bụ ọrụ 'Mirror Trader'. Dị ka ịzụ ahịa akpaghị aka, nke a na-enyere ndị ahịa aka ịzụ ahịa.
Igosipụta onye na-azụ ahịa nwere ahụmahụ na akụkọ ihe mere eme na-aga nke ọma pụtara na ịnwere ike ịnọdụ ala ma zuru ike ebe mmadụ na-azụ ahịa. Naanị mee nyocha, chọta onye na-azụ ahịa nke masịrị gị, ma gosipụta pọtụfoliyo ha. Ihe ọ bụla onye ahụ na - azụ ahịa ga - egosi na pọtụfoliyo gị - mana ọ ga - abụrịrị n ’itinye ego gị.
Ihe omume a abughi nani ndi ohuru choro ahia ma amaghi ebe ha ga - ebido - kamakwa ndi n’enye ego n’enweghi oge ichoputa onodu ahia 24/7. Ọ bụrụ na ịnweghị n'aka maka ịhapụ mmadụ ka ọ rụọ ọrụ na-akpaghị aka na-enweghị ikwuru ya, ịghara ichegbu onwe gị - dịka EuropeFX na-enyekwa gị ohere iji aka gị lelee onye ahịa.
Ngwa ahia na ọdịnaya agụmakwụkwọ
Dika ngwa oru na ihe omumu, EuropeFX di egwu. N'okpuru ị ga-ahụ ndepụta nke atụmatụ bara uru dịịrị gị na saịtị a
Akụrụngwa Trading Software
Ihe mgbaba ahia
Academylọ akwụkwọ vidiyo
Nkwụnye ego EuropeFX
Dịka onye ahịa ọhụrụ na EuropeFX, ị nwere ike ịdebanye aha ma tinye ego n'etiti € 200 (opekempe) na € 2,000. Agbanyeghị, biko mara na ị ga-emerịrị ndebanye KYC gị (mara onye ahịa gị) ma nyefee njirimara niile achọrọ n'ime ụbọchị 25.
Ọ bụrụ na ị daa mezue usoro a ma zipụ akwụkwọ nke akaebe nke adreesị wdg - a ga-emechi ahịa niile. A ga-eweghachiri gị ego gị, na akaụntụ gị ga-akwụsị. Nke a na-egosi na EuropeFX na-ewere oke ọrụ nchịkwa ya nke ọma.
Usoro nkwụnye ego nke EuropeFX nabatara gụnyere ndị niile na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ dị ka Visa, Mastercard, e-wallets na nnyefe waya.
Ihe ikpo okwu a anaghị akwụ ụgwọ azụmahịa ma ozugbo ị mechara KYC gị, ị nwere ike itinye ego ruru € 50,000. Ọ dị mkpa icheta na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịzụ ahịa na saịtị a ozugbo, mgbe ahụ ọ ga-aka gị mma iji kaadị akwụmụgwọ / debit ma ọ bụ obere akpa. Ihe kpatara ya bụ na nnyefe ego ụlọ akụ nwere ike were ụbọchị iji ruo akaụntụ gị.
Ego na EuropeFX
Zọ nchụpụ na EuropeFX bụ kaadị kredit / debit, nnyefe waya na e-wallets. Ego ọ bụla ị debere akaụntụ gị n'ime ya ga-eji maka iwepụ na ikpo okwu.
Ego nkwụghachi maka usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla bụ 25 EUR / USD / GBP ugbu a. Ọ bụrụ na ịchọọ ịrịọ maka nkwụghachi na usoro ịkwụ ụgwọ na ego ọzọ, EuropeFX ga-akwụ gị ụgwọ ọnụego mgbanwe na ọ ga-ewe opekata mpe otu ụbọchị iji ruo akaụntụ gị.
N'ihe banyere oge iwepụ, ikpo okwu na-ekwu na ọ nwere ike iburu ebe ọ bụla n'etiti 1 na 5 ụbọchị azụmahịa - dabere na usoro ịkwụ ụgwọ ị na-eji.
Leverage enyere na EuropeFX dabere na ngwa a na-ekwu. Anyị edepụtara okpu mkpuchi anyị hụrụ n'elu ikpo okwu iji kpochapụ alụlụụ:
Ihe mkpuchi ga-enyere 1: 2 aka
Mbak ruo 1: 5
Indices ruo 1:20
Gold ruo 1:20
Ngwongwo na-abụghị ọla edo ruo 1:10
Isi ego ruo 1:30
Ọ dị mkpa iburu n'uche na njedebe ndị a dị n'elu bụ maka ndị dabere na Europe. Ọ bụrụ na ibi na mpụga EU - ị nwere ike ibili rue 1: 200. N'agbanyeghi ebe i no, ma oburu na ichoro gi dika ọkachamara ahia - ị ga-enwe ohere ịrị elu ruo 1: 200.
24 awa ụbọchị, site na Mọnde ruo Satọde, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ nkwado ndị ahịa site na usoro ndị a:
Mkparịta ụka ndụ n'ịntanetị
Ikpo okwu nwekwara ngalaba Ajụjụ sara mbara. Nke a nwere ike ịchekwa gị ichere azịza nke nwere ike ịdị n'ihu gị.
Ka anyị bido site n’ikwu na akụkọ niile dị na EuropeFX gụnyere ebe a na-egosipụta demo. Na mgbakwunye na nke a, ihe ndekọ niile gụnyere: igbu usoro STP, mmụba kachasị nke 1: 30 (1: 200 maka ndị ọkachamara), nkwụsị nkwụsị nke 50%, nzukọ ọmụmụ, mgbasa mgbasa nke 0.1 pips, na webinars.
Ọ bụrụ n’inweghị ụdị akaụntụ ịchọrọ maka azụmaahịa gị biko biko lelee ndepụta nke akụkọ EuropeFX dị n’okpuru.
Akaụntụ Ngosipụta Ihe Egwu
Dabere na ikpo okwu ahụ, nkọwapụta na akaụntụ ngosi ahụ dị iche na nke 'ezigbo akụkọ' - ihe ruru 75% na-erughị na swaps na ọrụ.
Anyị anaghị eche na ma ọlị - akaụntụ ngosi dị oke ọnụ maka ma ndị ahịa ọhụụ ma nwee ahụmịhe. Typedị akaụntụ a na-enyere gị aka ịzụ ahịa na ego ngosi na ahịa nke na-egosipụta ọnọdụ ahịa ndụ.
Okwesiri ighota n’agbanyeghi na a ga-emechi akaụntụ ngosi gị ozugbo n’abalị iri atọ. Ugbu a, ka anyị buru ụzọ isi ihe dị iche iche nke akaụntụ ndị ọzọ na-enye site na EuropeFX.
Akaụntụ Bronze: Nkwụnye ego kacha nta site na € 1,000
Ihe ndekọ a gụnyere:
Njikọ mmekọrịta - oge nnwale
Centralzụ ahịa Central kwa ụbọchị - oge nnwale
Signalszụ ahịa akara ngosi akara ala - oge nnwale
Oge 1 nke onwe nke otu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ
Trading commission ọkọlọtọ
Akaụntụ Silver: Obere nkwụnye ego site na ,2,500 XNUMX
Akwụkwọ akụkọ Central kwa ụbọchị
Onwe onye na otu ulo akwukwo ahia - Ruo oge 3
EuropeFX itinye ego (Mirror Trader naanị)
Akaụntụ Gold: Nkwụnye ego kacha nta € 10,000
Akwụkwọ akụkọ Central Daily Trading
Dingzụ ahịa Central Premium Signals
Onwe Onye na Otu Trading Academy - Ruo 4 Sessions Total
Oge Nzuzo nke Onwe - oge 2 kwa ọnwa
Tonweta ime ụlọ - mmemme 1 kwa ọnwa
Nkwupụta Trazụ ahịa SMS
Investments EuropeFX - Ahịa ahia na RoboX
Isslọ Ọrụ Ahịa - Ruo ego 10%
Akaụntụ Platinum: Nkwụnye ego kacha nta € 25,000
Onwe Onye na Otu Trading Academy - Ruo 8 Sessions Total
Oge Nzuzo nke Onwe - Oge 4 kwa ọnwa
Nweta ime ụlọ ime ụlọ - Ihe omume 2 kwa ọnwa
Isslọ Ọrụ Ahịa - Ruo ego 25%
Akaụntụ Ego: Obere nkwụnye ego € 50,000
Onwe Onye na Otu Trading Academy - Ruo 16 Sessions Total
Oge Nzuzo nke Onwe - Oge 8 kwa ọnwa
Nweta ime ụlọ ime ụlọ - Ihe omume 4 kwa ọnwa
Isslọ Ọrụ Ahịa - Ruo ego 50%
Ọrụ VIP - Oge ikpe
EuropeFX: Mba Anabataghị ha
Na nwute, EuropeFX anaghị enye ọrụ ya n'ọtụtụ mpaghara, anyị edepụtara ha ka ọ dịrị gị mma:
Dabere na weebụsaịtị EuropeFX, enwerekwa mba ole na ole ndị ọzọ tozuru etozu maka akaụntụ, mana anyị enweghị ike ịchọta ozi ahụ.
Etu esi emeghe Europe na EuropeFX
Ka ọ dị ugbu a, ịmarala usoro isi nke usoro azụmaahịa EuropeFX, ma eleghị anya ọ ga-achọ ịmalite.
Ozi ọma ahụ bụ na ọ dị oke mfe ịtọlite ​​ma ị nwere ike ịzụ ahịa na usoro 3 dị mfe
Iji bido, gaba na weebụsaịtị EuropeFX wee pịa 'debanye aha'.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'oge a ịkwesịrị ijupụta aha na aha ikpeazụ gị, adreesị ozi-e, paswọọdụ pụrụ iche, obodo na akara ekwentị.
Nzọụkwụ 2: Debe Akaụntụ Gị
Nanị họrọ otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ dị n'elu ikpo okwu wee mee nkwụnye ego kacha nta nke 200 EUR / USD / GBP.
Kwụpụ 3: Bido na ahia
Ugbu a ị ruru nzọụkwụ 3, ị nwere ike ịmalite ahia na EuropeFX ma jiri ọtụtụ ngwaọrụ na atụmatụ anyị gwara gị maka nyocha a niile.
Y’oburu n’ichoghi na ikwuru n’ime mmiri, inwere ike zuru oke iji ahia ahia nke EuropeFX.
Na mkpokọta, EuropeFX bụ ezigbo ikpo okwu enyi na enyi, na-enye ndị ahịa ọtụtụ ngwa ego. A na-achịkwa onye na-ere ahia a nke ọma ma jide ikikere site na CySEC, nke pụtara na a ga-ekewa ego gị na akaụntụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Iwu a siri ike pụtakwara na a na-enyocha onye na-ere ahịa mgbe niile iji hụ na ọ na-agbaso iwu etinye.
Saịtị a abụghị naanị ihe dị mfe ịnyagharịa maka ndị mbido, kamakwa ọ na-enye ọtụtụ ihe mmụta, ngwa ọrụ yana nyocha teknụzụ nke bara uru nye ndị ahịa nwere ọkaibe ọkwa niile. Anyị na-eche na saịtị ahụ dị mfe iji yana ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ na atụmatụ dị maka ndị ahịa na ọkwa niile nke ahụmahụ dị egwu.
Ihe gbakwunyere na ikpo okwu a bụ na ọ na-arụ ọrụ na MT4, nke dị ka anyị kwuru, jupụta na ntụhie ya na ngwaọrụ bara uru, eserese na nyocha. Ọbụghị naanị nke ahụ mana onye na-ere ahịa na-enye atụmatụ azụmaahịa enyo na-egosi na ị nwere ike i copyomi onye ahịa na-aga nke ọma dị ka otu.
Enwere m ike ịnweta akaụntụ ngosi na EuropeFX?
Eeh. EuropeFX gụnyere akaụntụ nnabata na ụdị akaụntụ ọ bụla.
Achọrọ m ịnye ID ID iji mepee akaụntụ na EuropeFX?
Eeh, mana inwere ike bido ịzụ ahịa ozigbo ma ọ bụrụhaala na ịnyefee NJ gị zuru oke n’ime ụbọchị iri na ise.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe na nyiwe EuropeFX?
€ 200 bụ ego kacha nta iji bido ịzụ ahịa na Europe FX.
Ọ dị mma itinye ego na EuropeFX?
A na-echekwa data dị n'elu ikpo okwu site na iji 128-bit encryption. A na-eme azụmahịa ọ bụla na saịtị ahụ na sava ịnabata PCI - ọ bụghị ịkọwa ndị na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ na-achịkwa ma nye ikikere
Ndi EuropeFX nwere njirimara nkata ndụ?
Eeh. Na saịtị EuropeFX, ị nwere ike ịgwa ndị otu nkwado ndị ahịa na mkparịta ụka ndụ 24 awa kwa ụbọchị, Mọnde - Satọde.
Enwere m ike ahia EuropeFX Forex na CFDs na MT4?
Eeh. Usoro ahia a di egwu di na mkpanaka gi (android na iPhone) na desktọọpụ ma dakọtara ya na EuropeFX.
Edebere usoro ikpo okwu EuropeFX?
Ee, ọ ga-abụrịrị. A na-achịkwa ikpo okwu a site na CySEC nke Cyprus.